Bosch Shapes Mobility nke taa na ọdịnihu - RayHaber
HomeỤWAEurope49 GermanyBosch na-akpụ akpụ Mmegharị Ọhụụ na Ọdịnihu
08 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 49 Germany, Europe, ỤWA, Foto, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ 0
bosch akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ nke taa na ọdịnihu
Stuttgart na Frankfurt, Germany - Bosch gbara mbọ na-emegharị ngagharị dịka enweghị nchekwa, nchekwa na-adọrọ adọrọ dịka o kwere omume. Na IAA 2019, ụlọ ọrụ ahụ na-ewepụta ihe kachasị dị ọhụrụ maka nhazi onwe ya, akpaaka, ịkparịta ụka na ngagharị nke eletriki. Bosch ga-anọ n'ụlọ nzukọ 8, guzo C 02 yana kwa na ebe ngosi ihe ngosi nke Agora.
Bosch na-ekpughe teknụzụ ọhụrụ
BoschIoTShuttle - Ngwaọrụ maka ọdịnihu nke agagharị agagharị:
N'ọdịnihu, ugboala ndị na-anyaghị ụgbọ ala gburugburu ụwa, ma ha na-ebu ngwaahịa ma ọ bụ ndị mmadụ, ga-abụkarị n'okporo ámá. Site na ikike igwe eletrik, ha ga-awagharị n’etiti obodo wee jikọta gburugburu ha enweghị nsogbu. Bosch, nnwere onwe, ikike mmadụ na ịhazi teknụzụ ga-ewere ọnọdụ n'ụgbọ ndị ọrụ.
Kwadebere chassis - ikpo okwu electromobility:
Bosch nwere isi mmalite nke elektrọnikodu n'ọbá akwụkwọ ndekọ ya, gụnyere powertrain eletriki, sistemụ na-arụ ọrụ, brakes. Dịka akụkụ nke mmekorita mmepe na chassis na ọkachamara nkaaka Benteler, ụlọ ọrụ ahụ na-egosipụta otu esi ejikọ ngwaahịa Bosch niile maka ụgbọ ala eletrik. Na mgbakwunye, chassis emeziri emezi na-enyere Bosch aka ịmalite ngwaahịa n’atụmatụ iji mezuo ihe ndị a.
Mmanụ ala, ọkụ eletrik na ụyọkọ ụyọkọ - teknụzụ Bosch maka ụdị powertrain niile
Bosch choro ime ka ijeghari nke oma na mmekorita nke gburugburu ebe obibi na ngwa niile. N'ime ime nke a, ọ na-enye ụzọ dị iche iche nke powertrain, gụnyere igwe eletriki ọkụ nke ime, ezigbo mmanụ powertrain na ọkwa ọkụ eletrik dị iche iche.
Sistemụ mmanụ ikuku - e-agagharị nke dị anya:
Site na mmanụ ọkụ hydrogen na-eme site na ume ọhụrụ a na-emegharị emezi, ụgbọ ala mkpanaka mmanụ ụgbọala nwere ike ịga ogologo njem dị anya na-enweghị ikuku ikuku ma nye ha oge ịkpụcha mmanụ ọkụ. Na mgbakwunye na ụyọkọ mmanụ na-agbanwe hydrogen ka ọ bụrụ ike eletrik, Bosch na-azụlite usoro ihe niile dị mkpa iji dịrị njikere maka mmepụta.
Sistemu voltaji nke 48 - oriri dị ala na obere ikuku CO2:
Sistemụ volt na 48 nke Bosch na-enye hybridization ọkwa maka klaasị niile na-arụ ụgbọ ala, na-enye inyinya inyeaka iji kwado injin na-ere ọkụ n'ime. Teknụzụ mgbake na-echekwa umeji ma na-eji ya n'oge osooso. Njirimara a na -ebelata oriri uzu oku na mmuo ikuku CO2 site rue pasent 15. Bosch na-enye ihe niile dị mkpa nke sistem.
Ngwunye ọkụ eletrik dị elu - sọsọ maka ngwakọ ngwakọ na eletriki:
Vehiclesgbọ ala eletriki na ngwakọ pọpọfoliiki na-eme ka agbanye ikuku ebugharị mpaghara. Bosch na-enyere ndị nrụpụta ụgbọala aka ịkepụta ụdị powertrain ahụ ma na-enye ndị nrụpụta usoro dị mkpa. E-axle na - ejikọta elektrọnik eletriki eletriki eletriki eletriki eletriki eletri eletriki eletri eletriki eletri eletriki elebara ele anya. Arụpụtala arụmọrụ kompeni a dị mma maka oke akụkụ.
Nlekọta ahụ ọkụ - ịtọtọ ọnọdụ okpomọkụ n'ụgbọ ala eletrik na ngwakọ: Bosch na-eji njikwa ọkụ nwere ọgụgụ isi mee ka ụgbọ ala eletrik na ngwakọ dị elu. Mgbanye okpomoku okpomoku na oyi na-abawanye arụmọrụ nke batrị ma na -echekwa na ihe mmiri niile na-arụ ọrụ n'ime oke oke okpomọkụ ha.
Usoro ikuku ikuku na - agbanwe agbanwe - odi mma ikuku n’obodo:
Monitoringlọ ọrụ nlekota ihu igwe dị ukwuu ma dị ọnụ, na-atụpụta ikuku dị mma na isi ihe ole na ole. Usoro ikuku nke ikuku ikuku Bosch nwere obere igbe enwere ike kesaa n’agha n’obodo. Ha na-atụle ọ̀tụ̀dị okpomọkụ, nrụgide na iru mmiri na ezigbo oge, yana ụmụ irighiri ihe na nitrogen dioxide. Dabere na nha ndị a, Bosch mepụtara maapụ ikuku dị mma ma jiri ya na-agwa ndị obodo maka atụmatụ okporo ụzọ na nhazi.
E-ugwu igwe kwụ otu ebe - iji ụgbọ ala nwere ụkwụ abụọ na - eme ebe dị mfe nghọta:
Igwe igwe kwụ n'ugwu dị ugbu a bụ ngalaba siri ike na-eto eto nke ahịa igwe kwụ otu ebe. Ejikọtara sistemụ BoschPerformanceLine CX ọhụrụ kachasị maka ojiji egwuregwu ma nwee profaịlụ kọmpat. Onye na-adọrọ adọrọ na-eme ka ndị ịnya ụgbọ ala nwee mmetụta ebumpụta ụwa ọbụlagodi enyemaka enyemaka engine.
Usoro enyemaka maka ịkwọ ụgbọala na akpaaka - Bosch na-akuzi ịnya ụgbọ ala
Nchedo, arụmọrụ, nrufe nke okporo ụzọ, oge - akpaghị aka bụ otu n'ime ihe ga-ezute ihe ịma aka nke agagharị nke echi. Na mgbakwunye na ịnwe nnukwu pọtụfoliyo nke sistemụ enyemaka ndị ọkwọ ụgbọala, Bosch na-azụlite usoro ya, akụrụngwa ya na ọrụ ya maka akụkụ dị ala, nke dị elu na nke zuru oke.
Kwurula ọrụ valet na-adọba ụgbọala - ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ maka enweghị ọkwọ ụgbọ ala:
Bosch na Daimler etinyegoro ebe ana-adọba ụgbọala na Mercedes-Benz Museum parking na Stuttgart. Ọrụ nkwakọba ụgbọala izizi n'ụwa (SAE Level 4), nke ọrụ ụgbọ ala ezumike nka, na-eji ngwa nwere arụ ọrụ eme ihe. Cargbọ ala na-adọba onwe ya na-enweghị onye na-anya nchekwa, dị ka a ga-asị na aka na-adịghị ahụ anya.
Igwefoto n'ihu - nhazi ihe onyonyo site na algọridim na ọgụgụ isi
Igwefoto n'ihu na-ejikọta algorithms nke nhazi ihe oyiyi na ụzọ ọgụgụ isi. Teknụzụ nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa ma nwee ntụkwasị obi wee wepụta ụgbọ ala, ndị na-agba ụkwụ na ndị na-agba okirikiri na-edochaghị anya ma ọ bụ na-agafe n'okporo ụzọ dị n'obodo ukwu. Ihe omume a na-enye ohere ka ugboala malite ihe ma o bu breeki mberede.
Ihe mmetụta radar - sensọ gburugburu ebe obibi maka ọnọdụ ịnya ụgbọ ala siri ike:
Ọgbọ ọhụụ nke sensọ Bosch radar na-ejide gburugburu ụgbọala ahụ nke ọma, ọbụlagodi na ihu igwe adịghị mma ma ọ bụ ọnọdụ ọkụ adịghị mma. Oke mmetụta dị elu, ọnụọgụ dị obosara yana mkpebi siri ike na-apụta na sistemụ mberede breek nwere ike imeghachi omume karịa.
Motiongbọala na ntụgharị ọnọdụ ya - ọfụma maka ụgbọ ala:
Bosch azụlitela VMPS ụgbọ na-agagharị na ihe mmetụta, nke na-enye ohere ka ụgbọ ala ndị kwụụrụ onwe ha kpebie ọnọdụ ha n'ụzọ ziri ezi. Ihe mmetụta a na - enye ohere ka ugbo ala guzobere iji chọpụta ebe ụzọ ya ga - aga ebe ọ na - akwọ ụgbọala. VMPS na-eji akara mgbawa satịlaịtị zuru ụwa ọnụ (GNSS), nke data sitere na ọrụ ndozi na-esite na ya site na njikwa ihu na akara ọsọ ọsọ ụkwụ.
Netiwuwu netwọrụ (Connectedhorizon) - ọfụma karịa ma ruo ụbọchị:
Bosch na-aga n'ihu na-etolite mbara igwe ya. Drivingkwọ ụgbọ ala na-achọkarị ozi ka ukwuu karịa ka ọ dị ugbu a gbasara okporo ụzọ dị n'ihu, dịka isi ihe ndị dị ize ndụ, ọwara, ma ọ bụ n'akụkụ ụzọ bends. Igwe igwe elebara anya na-eji data zuru oke nke data iji nye ụgbọ ala ahụ ozi dị nchebe na ntụkwasị obi.
Sistem eletriki - isi ihe na - anya ụgbọ ala:
Ntọala eletriki bụ otu n’ime ihe dị mkpa maka ịnya ụgbọ ala. Sistemu eji eletrik elektrik Bosch na-enye nchekwa nchekwa ọzọ maka ndọghachi azụ. N'ihe banyere ọghọm dị ụkọ, ụgbọ ala na ụgbọ ala nwere ike ijigide ma ọ dịkarịa ala pasent 50 nke ọrụ nchịkwa eletriki.
Nkwukọrịta n'etiti ngwaọrụ, gburugburu ụgbọala na ndị ọrụ - Bosch na-ebute njikọ dị mma na agagharị
Ugbo ala nke na-adọ ibe ha aka na ntị banyere ihe egwu ma ọ bụ enweghị mkpịsị mkpịsị anya… Mkpagharị Bosch na-arụ ọrụ na-eme ka ndụ dịrị ndị ọrụ n'okporo ụzọ mfe mgbe ha na-abawanye nchekwa, nkasi obi na obi ụtọ. Ọrụ dị mfe maka ekele maka igwe mmadụ kọmputa kensinammuo (HMI).
Ngosipụta 3D - ogwe ngwaọrụ nke nwere mmetụta ọhụụ dị omimi:
Ngosipụta 3D ọhụrụ sitere na Bosch na -emepụta mmetụta atọ dị mma na ọkpọkọ ụgbọ ala, nke na-ahụ ma ndị ọkwọ ụgbọ ala ma ndị njem. Ọ na - eme ka anya na - elele sistemụ enyemaka ndị ọkwọ ụgbọala dịka iweghachite igwefoto. Ndị ọkwọ ụgbọala na-enweta ozi dokwuo anya, dịka ịdị anya na ihe mgbochi ma ọ bụ ụgbọ.
Perfectlykeyless - isi nnọchi ama:
Bosch keyless system sisitemu na arụ ọrụ na igodo echekwara na ama. Usoro ahụ na-enye ndị ọkwọ ụgbọala ohere ịtọghe ugboala ha na-akpaghị aka, bido injin ma kpọchie ụgbọ ala ọzọ. Ihe mmetụta nke etinyebere n’ime ụgbọ ala nwere ike ịchọpụta ama nke onye nwe ya dị ka akara mkpịsị aka ma meghee naanị onye nwe ya.
Semiconductor - ntọala nke agagharị:
Ndị na-enweghị semicondudu, ụgbọ ala ọgbara ọhụrụ ga-anọ ebe ha nọ. Bosch bụ onye na-ebute mgbawa mgbapụta na ụlọ ọrụ akpaaka. Chips Bosch na-enyere sistemụ ụzọ ụgbọ oloko aka ma ọ bụrụ nkwụsị GPS mgbaàmà ma nọgide na-enwe akwọ ụgbọala. Igwe ndị a na-agbanyụ ike nke ụgbọ ala eletrik na ihe mberede iji chebe ndị bi na nke ụgbọ ala na iji hụ na ọrụ mberede na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu.
Nkwukọrịta V2X - mgbanwe data n'etiti ụgbọ ala na gburugburu ha: drivingkwọ ụgbọ ala eletrik na igwe kwụ otu ebe ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ugbo ala na-agwa ibe ha na gburugburu ha. Agbanyeghị, akụrụngwa teknụzụ zuru ụwa ọnụ amabeghị maka mgbanwe data si na ụgbọ gaa ihe niile (V2X). Onye na-ejikọta teknụzụ na-enweghị onwe ya na teknụzụ V2X nwere ike ịkparịta ụka site na Wi-Fi na netwọ ekwentị. Nke a pụtara na ụgbọ ala nwere ike ịdọ ibe ha aka na ntị n'ihe egwu.
Na kọmputa - oche elektrọnị na - abịa n'ihu:
Mmụba eletriki, igwe eletrik na njikọ ya na-abawanye ụba n’ọrụ elektrọnikụ elebara anya. Bosch na-azụlite ihe nchịkwa dị mma, nke dị ike, amaara dịka kọmputa nọ n'ụgbọ, ma jiri ya rụọ ọrụ powertrain, akpaaka na sistemụ infotainment.
Batrị dị n'igwe ojii - ọrụ maka ndụ batrị ogologo:
Ọrụ igwe ojii ọhụrụ Bosch na-abawanye ndụ batrị na ụgbọala eletrik. Ọrụ ngwanrọ nke ọgụgụ isi na-enyocha ọnọdụ batrị dabere na data dị adị site na ụgbọala na gburugburu ya. Ọ na - achọpụtaputa ihe nrụgide na batrị ahụ, dịka chaja ọsọ na ọtụtụ okirikiri chaja. Dabere na data anakọtara, sọftụwia na-agbakọkwa usoro megide ịka nká, dị ka usoro nrụpụta kachasị nke kachasị.
Ọrụ amụma ọnọdụ amụma amụma ga - eyi ihe egwu:
Mmiri, snow na ice na-agbanwe ụzọ ejide ma ọ bụ nkewa na - enwe nsogbu. Iji mee ka ụgbọ ala ndị kwụụrụ onwe ha mụta otu esi agbanwe omume ịkwọ ụgbọala ha na ọnọdụ ndị dị ugbu a, Bosch arụpụtala ọrụ ọnọdụ ọnọdụ igwe ojii nwere. A na-ebufe ozi dị ka ihu igwe, njiri elu okporo ụzọ na ihe na-anya ụgbọ ala, yana ọnụọgụ elekere anya esemokwu na-ebugharị na ugboala na-arụ ọrụ na ozugbo na igwe ojii.
Igwe eji ime ụlọ - onye na-ahụ maka nchekwa dị ukwuu:
Mwakpo ụra oge dị mkpirikpi, ndọpụ uche ma ọ bụ eriri afọ echefuru echefu, dị ka ụgbọ ala n'ime ụgbọ ala nke nwere ike ibute nsonaazụ na-adịghị mma, teknụzụ Bosch abụghịzi okwu nchekwa. Sistemụ nlere anya n'ime ụgbọ ala Bosch, nke dị na nke a na-ahazi na nhazi nke otu na igwe-igwe ọ bụla, na-achọpụta ọnọdụ dị oke egwu n'ime sekọnd wee dọba onye ọkwọ ụgbọala ahụ.
88 afọ ole na ole gara aga taa 18 / 01 / 2012 Arụmụka ahụ na aha tram na Cumhuriyet Street, mgbe President Altepe mere ihe ọmụma dị egwu ụnyaahụ. Ọ bụ ezie na ewere nzọụkwụ mbụ maka trasa na Bursa na 108 afọ gara aga, a hụrụ na usoro nhazi nke emere na 88 afọ gara aga dabara n'usoro atụmatụ nke oge a. Iji belata njupụta ahụ, o kpebiri imechi okporo ụzọ Cumhuriyet maka okporo ụzọ ụgbọala ma wuo otu ụgbọ okporo ígwè otu ebe n'ebe a. ... Ọ họọrọ ụgbọ okporo ígwè ochie maka tram ahụ iji mee ka àgwà dị ọhụrụ na-adọrọ mmasị, ọ na-akpọkwa ya tramtị na-enweghị atụ n'ihi ụgbọala ochie. Ọnọdụ a bụ ... na Bursa ...
Bosch engineering GmbH 28 / 12 / 2010 Adreesị: Robert-Bosch-Allee 1 DE - 74232 E-Mail: BEG.Rail@de.Bosch.com Intanet: http://www.Bosch-Engineering.com Kpọtụrụ: Herr Sascha Niemz
Bosch Rexroth 28 / 12 / 2010 Adreesị: Partensteiner Str. DE 23 - 97816 Lohr onwem Main ekwentị: + 49-9352 / 18-4763 Fax: + 49-9352 / 40-4763 E-Mail: iga @ boschrexroth. Internet: http: //www.boschrexroth. Na Kpọtụrụ: Azara m Sascha Niemz 3.2.30 Tilting usoro 3.2.41 Control components
Bosch Scharniere 28 / 12 / 2010 Okwu: Voltastraat nl 84 - 7006 RW Doetinchem ekwentị: + 31-314 / 36 99 88 Fax: + 31-314 / 34 16 45 E-Mail: welcome@boschscharniere.co Internet: Kpọtụrụ na http: //www.boschscharniere. : Herr Godfried Kaanen
Ntụle na-atụ egwu: Ndozi, nhazi na mgbidi nke BOSCH TB 24000 ụdị mpempe kpakpando DE 72 locomotives 26 / 02 / 2013 REPUBLIC steeti ụgbọ okporo ígwè obi DE 24000 na locomotive Bosch TB 72 ụdị-ezighị Starter moto idozi, mmezi na Ndozi rụrụ ọrụ xnumx.bölg ngwongwo na Services Procurement Commission-agụụ na-agụ obi-ọkọnọ ntinye ikwe ọnụ Ịrụ Ọrụ Dịịrị: Enver Timurbog ka obi Manager ekwentị: 7 / 02722137621 Auction Manager Fax: 4309 Ilan Ụbọchị: 02722141943 23.02.2013: 00: 00 Auction Ụbọchị: 00 19.03.2013: 00: 00-00 / 15 nkọwapụta Cost: 30 kwa obi usoro: oghe obi na obi Isiokwu: Commodity Trade Registration No: 100 / 2013 Mail: tcddihalekomisyonuafyo si @ tcdd.gov.tr ​​TENDER BNCHX TBDD.gov.tr ​​TENDER BNCHX NBTD TENDER BOSCH TB 19536 Ụdị ụdị mpempe akwụkwọ nrụzi, mmezi na nrụzi ọrụ nke DE 24000 locomotives ga-azụ. Ọrụ TCDD 72. Site na Mpaghara mpaghara: Ndenye Ndebanye aha: 7 / 2013
Den Bosch ụgbọ ala na-akwagbu 12 / 07 / 2013 Ụgbọ okporo ígwè Den Bosch kwụsịrị Ndị chọrọ ịga Den Bosh site na ụgbọ oloko, deba akụkọ a. A kagbuola ụgbọ okporo ígwè taa na obodo ahụ. Dị ka nkwupụta nke Dutch Railways NS; A ga-akwụsị ụgbọelu ụgbọ mmiri Den Bosch n'ehihie a. Ọrụ ahụ ga-amalite mgbe 12 na ụgbọ elu si obodo ahụ ruo Endhoven na Tilburg ga-akwụsị. NS na obodo okporo ụzọ maka oge na-eme ka ọrụ ahụ dị ọhụrụ, na-egosi na NS, ihe dị mkpa maka imezi ebe ahụ ka a ga-eme, ya mere a kagburu obodo na nbata ụzọ ahụ, o kwuru. N'ime ụbọchị ole na ole gara aga, anyị anọwo na nzere
Na-achọ Bosch na ụwa 16 / 04 / 2014 Bosch na-achọgharị ụwa: Ọrụ zuru ụwa ọnụ na onye na-ahụ maka ọrụ Bosch ga-esonye na njem ụbọchị gaa 16 na njem ụwa nke a na-akpọ World Bosch World Experience ". Njem njem a nke okpomọkụ a iji gaa ọrụ Bosch gụnyere London, Panama, San Francisco, Shanghai na Singapore. A ga-anabata arịrịọ n'etiti 14 April na 16 May 2014 site na www.experience.bosch.com.tr. Ndi mmadu choro isonye na ndi ozo choro ka ha deba aha ha na ebe nrụọrụ weebụ, zaa aj ujua banyere ebe obula ma nye ha ozi nkeonwe ha. Mgbasa mgbasa ozi ...
Bosch Rextorh 20 / 01 / 2019 Bosch Rexroth AG bụ otu n'ime ndị ọkachamara kachasị n'ụwa na nkà na ụzụ na nchịkwa. Kemgbe 1976, Bosch Rexroth Otomasyon San. Tic. Inc. Ụlọ ọrụ na Turkey na aha, maka ahịa na Rexroth drive nke igwe na osisi na-amị ahaziri ngwọta maka akara na ije. Bosch Rexroth bụ onye gị na ya na-eji ngwa ngwa, ngwa ọrụ na injinia na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Future skiers na-eto na Bitlist 29 / 01 / 2015 Ndị na-eto eto dị n'etiti 5 na 15 nọ na Ngwongwo Ọzụzụ Mmiri nke Ski na-arụ ọrụ iji soro ndị otu mba nọ na slope ski ski ụwa. Ụmụaka nọ n'agbata 5 na 15 na Ogige Ọzụzụ Ndị Nlekọta Mmiri nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ntorobịa na Ụlọ Ọrụ na-arụ ọrụ iji soro ndị otu mba na egwu egwu ski ụwa. Ụmụaka ndị na-ekere òkè n'Ọzụzụ Ngwá Ọrụ Ski Basic bụ nke Ngalaba Ntorobịa nke Ọrụ Ntorobịa na Ụlọ Ọrụ na-enweta na ọzụzụ nkuzi. Na Bitlis, nke yiri skiing, Erhan Onur Güler na El-Aman Hanı na-azụkwa na ebe a na-anọ n'ọkwa ebe nlekọta nke ndị nkụzi.
Ndị ọhụụ n'ọdịnihu ga-eto site na Denizli 22 / 02 / 2016 Ndị ọgbọ nke ọdịnihu ga-eto site na Denizli: Egwuregwu ski skirts nke 650 na ohere ndị dị mkpirikpi ka e gosipụtara na ọrụ Blue Blue, Denizli Bozdağ 'na Denizli n'ime usoro mmemme nke usoro ihe nkiri njem ndị ọzọ nke South Aegean Development Agency. N'okpuru nkwado nke gọọmentị Denizli, n'okpuru nhazi nke Tavas District Governorate, Denizli Metropolitan Municipality, Tavas Municipality na Provincial Directorate of Youth Services na Egwuregwu rụrụ na mmekorita ya na 'Blue to White Denizli Bozdag', Bozdag Ski Center malitere. Site oru ngo nke South Aegean Development Agency (GEKA) kwadoro n'ime usoro Alternative Tourism Infrastructure Development Programme, ụmụ akwụkwọ na-achọ ịkwọ ụgbọ elu ma nwee ohere ole na ole na-emetụta egwuregwu a. Site na Tavas ochichi ...
Bosch teknụzụ ọhụrụ
88 afọ ole na ole gara aga taa
Ntụle na-atụ egwu: Ndozi, nhazi na mgbidi nke BOSCH TB 24000 ụdị mpempe kpakpando DE 72 locomotives
Den Bosch ụgbọ ala na-akwagbu
Na-achọ Bosch na ụwa
Future skiers na-eto na Bitlist
Ndị ọhụụ n'ọdịnihu ga-eto site na Denizli